मौरी हत्या गरेको अभियोगमा मानिस पक्राउ ! | Rajmarga
मौरी हत्या गरेको अभियोगमा मानिस पक्राउ !
मानिसले मानिसको हत्या गरे उसलाई सजाय दिने गरिन्छ । केही यस्ता पनि हुन्छन् जो जनावरको हत्या गर्दछन् । तर, तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको छ कि कसैले मौरीको हत्या गरेको होस् र हत्यारा पक्राउ पनि परेको होस् ।
अमेरिकाको आयोवा राज्यमा प्रहरीले मौरी पालन व्यवसायलाई कथित रुपमा हानी पुराएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार यसकारण पाँच लाख मौरीको मृत्यु भएको छ।
सू सहरको वाइल्ड हिल हनी फार्ममा दुई जना युवकले मौरीको ५० वटा घार तोडफोड गरे र यसकारण चिसोले मौरीको मृत्यु भएको थियो । उक्त समय उक्त क्षेत्रमा हिउ परिरहेको थियो ।
पक्राउ परेका दुई युवामध्ये एक जनाको उमेर १२ र अर्काको १३ वर्ष रहेको बताइएको छ। वाइल्ड हिल फार्मका मालिकका अनुसार यो हरकतबाट उनलाई ६० हजार डलर हानी भयो । उनले यो अपराधलाई ‘पूर्णरुपमा मुर्खतापूर्ण’ बताएका छन् ।
फार्मका मालिक जस्टिन एंगलहार्टले एउटा स्थानीय पत्रिकासँग कुरा गर्दै भने–उनीहरुले हरेक घार तोडिदिए र सबै मौरीलाई मारे । यसबाट हाम्रो व्यवसाय चौपट भएको छ।
गत २८ डिसेम्बरमा जब एंगलहार्ट र उनकी पत्नी मौरीको घारबाट हिउँ हटाउन पुगेका थिए तब उनीहरुले पुराका पूरा फर्म उजाडिएको अवस्थामा देखे । एंगलहार्टले भने–उनीहरु हाम्रो बगैचामा प्रवेश गरे, उनीहरुले हाम्रा सबै औजार हिउँबाहिर फ्याँकिदिए, उनीहरु जे गर्न सक्थे उनीहरुले गरे । यस्तो लाग्दैन कि केही चोरिएको होस तर उनीहरुले सबै कुरा तहस नहस बनाइदिए ।
एंगलहार्ट र उनी पत्नीलाई भएको नोक्सानले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानिसको ध्यान खिचेको छ ।मानिसहरुसँग तत्काल जानकारी जुटाएर प्रहरी पुग्न सक्यो र दोषीलाई पक्राउ गर्न सक्यो । मौरी व्यवसाय विमा कम्पनीको दायरमामा आउँदैन । र, मानिएको छ कि यो तोडफोडपछि फार्म मालिकको जिविकाको साधन समाप्त भएको छ।
तर, उनका लागि अनलाइनमा रकम जम्मा गर्ने अभियान सुरु भएको छ, जसको माध्यमबाट अहिलेसम्म ३० हजार डलर जम्मा भइसकेको छ। यसको सहयोगमा उनी बसन्तमा पुनः आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने छन् । दुई किशोरमाथि अपराधिक गतिविधि गरेको, खेतीमा काम गर्ने पशुलाई हानी पुराएको, सम्पत्तिमा हानी पुराएको र चोरीको सामान राखेको अभियोग लगाइएको छ । एजेन्सी
Previous post: वर्षौंपछि श्रीमतीलाई देख्न पाउँदा शर्मा र विक दंग
Next post: १३ वर्षीया बालिकामाथि जवरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पक्राउ